भारतको चेतावनी,नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छौं !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/भारतको चेतावनी,नेपाललाई नाकाबन्दी गर्छौं !!
काठमाडौँ दूवै देशको आआफ्नो अडान रहेका कारण नेपाल र भारत बीच ताती रहेको सीमा विवादले नयाँ मोड लिन थालेको छ । नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नयाँ नक्शा प्रति दिल्लीले फेरि आपत्ती जनाएको छ ।
‘ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणका आधारमा नेपालले दाबी नगरी कृ`त्रिम विस्तार बाट नेपालले नयाँ न`क्शा बनाएकोमा यो मान्य हु`दैँन’ –स्रिवा`स्तवले भने । नेपालले गरेको वार्ता अनुरोधलाई स्वीकार्दै कूटिनीतिक माध्यमबाट मुद्दालाई सुल्झाउन प्रयास हुने सक्ने आशा रहेको छ । तर, नयाँ नक्शाले कूटिनीतीक तहबाट हुने वार्तालाई समेत धक्का पुर्याएकोे छ ।
नयाँ नक्शा पारित गरे पश्चात नेपाल र भारतको कूटनी`तिक सम्बन्धमा संकट देखापरेको छ । नेपालले दाबी गरेको भूभाग कृत्तिम रहेको छ र उक्त निर्णयले सीमा मुद्दाहरुमा हुने वार्ताको दूईपक्षिय साझे`दारी`लाई उल्लंघन गर्न खोजेको भा`रतले आरोप लगाउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उत्पन्न पछिल्लो अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै अब दिल्ली कडा रुपमा प्रस्तुत हुने विषय भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेपश्चात दूवै देशबीचको सचिवस्त`रमा वार्ता गर्न नेपालले भारतलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेतापनि भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भने अप्रिल १० तारिखको टेलिफोन संवादमा महामा`रीलाई र तत्काल उत्पन्न भएको सीमा विवादलाई लिएर संवाद भएको थियो । नेपालले चालेको कदमले सम्बन्धमा धक्का पुगेको भनिएको छ ।
भारतले सीमा विवादीत क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप र जबरजस्ती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पछि नहटे सन् २०१५ मा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी पुनः निम्तिन सक्ने जनाइएकोे छ । भारतले प्रभावकारी र आक्र`मक कदम चाल्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । श्रोत टाईम्स अफ इंडिया